Izitayela ezi-5 ze-SPA zango-2019 Zembuliwe
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Lithuania » Izitayela ezi-5 ze-SPA zango-2019 Zembuliwe
I-11 min ifunde
Amathrendi we-2019 SPA ajabulisa kakhulu yizindaba ezinhle zemvelo nabathandi.
Eminyakeni yamuva nje, imboni yezempilo ibikhula ngokushesha okukhulu kunangaphambili. Ngasikhathi sinye, ukugxila kwama-SPA kusukile ebuhleni kuya kunhlalonhle yokuguqula konke, kwakha isethi entsha yokuthambekela okuzoshayela umhlaba we-SPA e2019.
INyakatho Yurophu - eseqhulwini lwezinto ezintsha ze-SPA - isivele yamukela ezinye zezitayela zonyaka ozayo.
“Kulo nyaka, besilokhu sibheka umkhuba“ wokubuyela esimweni semvelo ”we-SPA. Sivame ukuzwa kubavakashi bethu ukuthi ukukhetha kwabo amahhotela e-SPA kuncike ekusondeleni kwehlathi kanye nohlobo lwezindlela zokwelapha ezingalunikeza. Sikholwa ukuthi ngonyaka wezi-2019 lo mkhuba uzoqhubeka uthuthuka futhi abantu bazolangazelela imvelo njengomthombo wenhlalonhle, endaweni abakuyo nasekwelashweni kwabo ”, kusho uKęstutis Ramanauskas, uMqondisi Indawo Yezempilo eDruskininkai, idolobha laseLithuania SPA elinamasiko ezempilo asenamakhulu eminyaka.
Ngokusho kochwepheshe be-SPA kanye nabezempilo eDruskininkai, lezi yizindlela eziyisihlanu eziyinhloko abalindele ukuzibona zikhula ekuthandeni ngo-2019:
Ukuhamba nge-SPAcation ende. Umkhuba omusha ukuya eholidini ehhotela le-SPA futhi ujabulele ukwelashwa nsuku zonke. Izikhungo ze-SPA zinikela ngamaphakeji eholide kanye namadili aphambili kulabo abazimisele ukuhlala isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezimbalwa, beheha abantu abaningi ekuzameni izinqubo ezintsha. I-SPAcation ingafaka ukuzilibazisa okusebenzayo, amaphakheji wokuzivocavoca okhuthaza ezempilo kanye nokuhlangenwe nakho kwangempela kokudla. I-Aman Spa e-Aman Le Melezin e-French Alps inikezela ngamaphakeji akhethekile wokudlula e-ski, izikhathi zangaphambi kokushushuluza e-yoga, ukudla kwakusihlwa, kanye nokwelashwa kwe-SPA kulabo abahlala e-resort kusuka ezinsukwini ezi-3 kuye kwezi-6. Ihhotela Kalevala eFinland kunamaphakeji akhethiwe aqukethe ukubhucungwa, ama-sauna namabhati ahlanganiswe nohambo lwe-snowmobile safari neminye imisebenzi ethokozisayo.
2. Ukugeza amahlathi. IShinrin-Yoku ngumkhuba waseJapan wokugeza amahlathi owaziwa ukuvula amandla angaqondakali wehlathi futhi ulisebenzisele ukwelashwa nokwelashwa. Lokhu kwelashwa, okubandakanya ukuhamba amabanga amade ehlathini, kulindeleke ukuthi kudume umhlaba wonke ngonyaka we-2019, njengoba abantu bethatha indlela ethe xaxa futhi ebhekele impilo yabo. Ukugeza amahlathi kufakazelwa ukuthi kunciphisa amazinga e-cortisol, kunciphise ukucindezeleka, kunciphise ukucindezeleka futhi kube nomthelela omuhle ekucindezelweni kwegazi. Abahlambi bamahlathi baseJapan bavame ukuya IChubu-Sangaku National Park lapho abangakhetha khona ukuthi bazicwilise ngokuphelele emvelweni noma bakuhlanganise nokuzilibazisa kwenye yezindawo zokungcebeleka zokushibilika eqhweni nasezikhungweni zentwasahlobo ezishisayo. IDruskininkai, idolobha le-SPA eLithuania, laziwa njenge "lungs of Lithuania" ngenxa yamahlathi omuthi wepayini womlingo ozungeze idolobha. Izivakashi eziya eDruskininkai zinamathuba amaningi okwelashwa kwehlathi - zingagibela amabhayisikili zinqamula emahlathini esihlahla sikaphayini, zijabulele ipaki yokuzijabulisa yehlathi i-UNO noma zikhulule ukucindezeleka ngokuhambahamba Ipaki yezempilo yaseDineika. Idolobha le-SPA lisendaweni ekude kakhulu nezindawo ezisemadolobheni kakhulu, kanti ukwelashwa kokugeza amahlathi kungenye yezinto ezithandwa kakhulu eDruskininkai.
I-SPA yezingane. Eminyakeni embalwa edlule, izingane bezilandela isibonelo sabazali bazo futhi zamukela ama-SPAs - futhi lokhu ngeke kume. Ngokusho kwe- Inhlangano Yomhlaba Wonke ye-SPA, ngaphezu kwengxenye yama-SPA acishe abe ngu-14,000 e-USA anikela ngamaphakeji emindeni, intsha noma izingane - kanti iYurophu ilandela ezinyathelweni zabo. Izindawo ezilungele izingane zithatha izikhungo ze-SPA - kusuka kuma-sauna akhethekile anezingane kuya ekwelashweni kasawoti. Izinqubo ezahlukahlukene zenzelwe ukugcina izingane zijabule ngenkathi ziba nempilo. Ngisho nezinqubo zobuhle zingashintshwa nezidingo zezingane. E-Austria, I-Grand Resort Bad Ragaz ikhaya lendawo ye-SPA lapho abantu abadala bengabelana ngezinqubo zokuphila kahle nezinhle nezingane. Imenyu yezingane zayo i-SPA ifaka ukubhucungwa uju noshokoledi, i-manicure kanye nenqubo 'yezinyawo ezijabulayo'. Ukudonsa umoya, izikhathi zomhume kasawoti, i-apitherapy, izifihla-buso zobuso nezindawo zokugeza zezithelo - lezi zindlela zokwelapha zesikhashana zifakiwe ezinhlelweni ze-SPA zezingane I-TAOR-Karpaty, ihhotela lase-Ukraine nenhlalakahle.
4. Ukushisa nodaka kuyathandwa futhi. Imibhede yeHammam, ukwelashwa ngodaka, ama-sauna - izindlela zokuphumula nokuvuselela obekukhona amakhulu eminyaka - ziya ngokuya zithandwa ngoba abantu baphinde bathola izinzuzo zabo zezempilo. Izikhungo ze-SPA ezintsha ziguqula lezi zinqubo zibe okuhlangenwe nakho okunethezeka nokuhlukile ngokuzenezela ngamakhambi akhuliswa endaweni, amafutha abalulekile nezimonyo ezisezingeni eliphakeme. Ngokwesiko lendabuko le-hammam embhedeni nangaphezulu kwama-sauna angama-20, abathandi be-SPA kufanele balibangise eDruskininkai ezokungcebeleka nezempilo aqua, ixhunywe ku- I-FLORES Ihhotela ne-SPA kanye neDruskininkai resort yezempilo. Isikhungo sinikeza ububanzi obubanzi bezinqubo ezihlanganisa izithako zemvelo kanye nokwelashwa kwendabuko - konke kusuka ekusetshenzisweni kodaka lokwelashwa kuya kumasiko egolide. Ama-sauna angama-infrared, angawushisi umoya kepha afudumeza umzimba ngaphakathi ngaphandle, nawo ayanda ngokuthandwa. Lapha, ukushisa kungena ngokujule kakhudlwana, kuholele ekudambiseni ubuthi obukhulu, ukuphumula, ukujikeleza okuthuthukile kanye nesikhumba esicacile. Kulm Ihhotela St. Moritz eSwitzerland kunezindawo ezikhethekile ezingama-30-37 C zangaphakathi.
Izinsimbi eziyigugu namatshe asetshenziselwa ukwelashwa. Izimfanelo zokuphilisa izinsimbi eziyigugu namatshe - njengesiliva, igolide, amaparele kanye nenhlaka - kuyatholakala futhi. Zizosetshenziselwa ngokwengeziwe izinqubo zezempilo nobuhle. Izindawo zokugeza ze-Silver ion kuthiwa zithuthukisa inhlalakahle nethoni yesikhumba. Zibuye ziphumuze umzimba nengqondo, zinciphise ukukhathala futhi zibuyise amandla esele. I-Amber ikhipha i-amber acid emvelweni lapho kufinyelelwa izinga lokushisa elifanele, okuthinta uhlelo lwezinzwa nokukhulula ukucindezeleka. Igolide ligcina isikhumba sikhazimula futhi lingelapha nezifo zesikhumba ezahlukahlukene kanye nezifo ngenxa yezimpawu zalo zokulwa namagciwane. Ngisho nasezindaweni zokungcebeleka ezingabizi zaseTurkey, njenge Inganekwane ye-Aqua e-Izmir, abantu bangazama ukubhucungwa nge-powder yegolide namafutha abalulekile. I-Amber - evame ukubizwa ngegolide laseLithuania - isetshenziselwa kabanzi izindlela zokuphila kahle eMpumalanga Yurophu. Izikhungo ze-SPA eLithuania zithanda IGreat SPA Lietuva mema izivakashi zabo ukuthi zizame ukubhucungwa inhlaka, ukufaka izicelo kanye nokukhuhla. Ngemuva kwezinqubo zokuvuselela bangazama ngisho netiye le-amber - isiphuzo esigcwalisa umzimba ngamandla afudumele aleli tshe.
Europe Finland Impilo Ihhotela Lithuania Indawo yokulala Spa ISt. Moritz Switzerland
USheikh Mohd. UParvez oqanjwe ngegama elithi GM eShravanthi Sarovar Portico Bengaluru
Ukuvakasha okuyizigidi ezingama-197: Ukuvakasha ebusika kudlondlobala eChina
Imakethe Yamabhendi Okugeleza Kwegazi 2018: Umhlaba jikelele...
Impi Yezinkampani Zenethiwekhi Ezishibhile: Isitayela Sase-Italy!
Indlela entsha Yezokwelapha YeCannabis Yezingane ezine...
Ulwazi Olusha Lokucwaninga Ngempilo Ngemva Kokufa
Ukunwetshwa kwe-REAL ID Act kunxuswe kulandela ubhubhane
I-Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis Umuthi Omusha Womtholampilo...
Izindawo Ezingcono Kakhulu Nezimbi Kakhulu Zokuthenga 'Til You Drop
I-Turks and Caicos: USihlalo Omusha Ebhodini Labavakashi
Umlilo omkhulu uvale isikhumulo sezindiza i-Geneva International
IVienna iheha abenzi bamafilimu bamazwe ngamazwe ngama-euro ayizigidi ezimbili...
I-Seychelles Iyakhanya Embukisweni Odumile Wokuvakasha wase-Danish
I-Solid Board Market 2022 Abadlali Ababalulekile, Ukuhlaziywa kwe-SWOT...
I-Skal International Tokyo Inikela ngo-500,000 Yen e-Ukraine
I-Jamaica Izikhundla Yona Izoba Isango LeMpumalanga Ephakathi ...
Isiguli sokuqala esinokulahlekelwa kwezindlebe okuhlobene neminyaka sithola...
I-United Airlines kanye ne-Singapore Airlines banweba...
Umkhiqizo Omusha Olawulwayo Wokulahla I-Ophthalmic Eye Drop
Ibambezela ukuqhubekela phambili kokuwohloka komqondo kwe-Alzheimer
Ukubaluleka kwamabheji e-tourism eco ukuze kukhule njengabahambi...
I-China ikhiphe okokuqala ukuzimela okungalawulwa muntu ...
Okuzenzakalelayo: I-Sri Lanka imisa zonke izinkokhelo kwamanye amazwe...
Isivivinyo Siqala Nge-Monotherapy Yokukhetha Okuthuthukile noma...
Idatha Entsha ku-Myeloma Ephindaphindekile/I-Refractory...
I-Boeing iqamba ihhovisi layo eliseNyakatho Virginia elisha emhlabeni jikelele...